Cunto kasta ayaa muhiim ah - Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-la'aanta
Arrimo kasta oo cunto ah waxa ay ardayda iyo qoysaska ka hawlgelisaa go'aannada ku saabsan barnaamijyada adeegga cuntada ee dugsigooda.
Oregon-ka Hunguri-la'aanta, waxaanu aaminsanahay in bulshadu ay sida ugu fiican u yaqaaniin sida carruurtooda loo nafaqeeyo. Laakiin way ku adkaan kartaa qoysaska inay ogaadaan meesha laga bilaabo inay beddelaan cuntada dugsiga ee ilmaha! Barnaamijyada nafaqaynta carruurta ee dawladda dhexe (“cuntooyinka dugsiga”) waxay noqon karaan kuwo adag inay u socdaan qoysaska raba inay fikrad ka bixiyaan barnaamijka cuntada dugsigooda. Dhanka kale, shaqaalaha nafaqeynta dugsiga ayaa si isa soo taraysa u fidsan, iyaga oo qaba in ay qabtaan shaqo dheeraad ah agab iyo nidaamyo taageero oo yar.
Cunto kasta oo arrimo ah waxay ka shaqayn doontaa hal beel dugsi si ay:
Ku dhaqan hal isbedel oo ay bulshadu waddo barnaamijka adeegga cuntada ee dugsiga wadaagga ah,
Xoojinta xiriirka ka dhexeeya xubnaha bulshada iyo shaqaalaha nafaqeynta dugsiga, iyo
Baro sida jaaliyadaha dugsigu u gaadhi karaan go'aamo ku jira barnaamijyadooda cuntada ee ka tarjumaya baahiyaha ardayda iyo qoysaska.
Si tan loo sameeyo, cunto kasta oo khusaysa marka hore waxay la xidhiidhaa qoysaska iyo ardayda si ay u ogaadaan isbeddelada barnaamijka cunnada dugsigoodu u baahan yahay inuu u ahaado mid u wanaagsan bulshada oo dhan. Shaqadan ka sokoow, mashruucani waxa uu hiigsanayaa in lagu taageero shaqaalaha adeega cuntada agabka deeqda iyo kaalmada farsamada si loo sameeyo isbedelada ay bulshadu wado ee barnaamijkooda cuntada dugsiga. Ugu dambeyntii, dhisidda xiriirka ka dhexeeya shaqaalaha nafaqeynta dugsiga iyo xubnaha bulshada, Cunto kasta oo khusaysa waxay rajaynaysaa inay ka tagto dhammaan bulshada dugsiga si ay u sii wadaan go'aannada wadajirka ah ee udub dhexaad u ah baahiyaha bulshada.
Gaajo-free Oregon waxa ay raadinaysaa in ay la shaqeyso hal beel oo dugsi ah Reynolds, David Douglas, ama Dadweynaha Portland degmooyinka dugsiyada. Shaqadu waxay bilaabmi doontaa Maarso 2020, iyada oo la hiigsanayo in la helo ugu yaraan hal beddel cunto dugsi oo bulshadu waddo oo la hirgeliyo Disembar 2020.
FAQ ee Shuraakada Bulshada
Halkan ka akhri PDF
FAQ ee Agaasimayaasha Nafaqeynta Dugsiga iyo Maamulayaasha Kale
Cunto kastaa waa muhiim Flyer
Haddii aad xiisaynayso sida dugsigaagu uga qayb qaadan karo cunto kasta, la xidhiidh Alison Killeen at Hunger-free Oregon [emailka waa la ilaaliyay] ama (503) 595-5501 x305.